Vanotengesa Mumigwagwa kuMasvingo Vodzingwa neMauto neMapurisa Ane Zvombo
Vanotengesa mumigwagwa pamwe nevatyairi vemakombi vanoti havasi kufara nekudzingwa kwavari kuitwa muguta reMasvingo nemapurisa pamwe nemasoja akapakatira pfuti.
Mudhorobha reMasvingo maswera makati zii zvichitevera kudzingwa muguta iri kwaitwa vanotengesa mumigwagwa pamwe nekurambidzwa kwemakombi kupinda mukati meguta.
Mauto nemapurisa anga achibatsirwa nevashandi vekanzura yeMasvingo.
Asi vagari vanoti kushandiswa kwemauto nemapurisa ane zvombo zvehondo kunotyora kodzero dzavo sezvo munyika mune runyararo.
VaDenis Gomo, avo vanotyaira motokari diki dzinotakura vanhu, vanoti vatsamwiswa zvikuru nekutadziswa kushanda kuti variritire mhuri yavo.
"Vakatopakatira pfuti zvekuti vari kutoti ukangotakura vanhu tokupfurira mavhiri saka taka topaka hatisi kana kusevenza, ndomararamiro atinoita saka hatizivi kuti vanoda kuti tiite sei," vadaro VaGomo.
Mumwe anotengesera mumigwagwa, Muzvare Faith Moyo, vanoti vanoshushikana zvikuru nekudzoka kwaita mauto mumigwagwa vachiti izvi zvinovatyisa uye kutadzisa kuita basa rinovararamisa.
"Taitofunga kuti zvavakambouya vakodzera havachadzoki manje izvezvi vadzoka hatina mari dzekubhara marent kana dzevana vechikoro nekuti mutaundi hamusi kana kushandika, hatisi kana kuwaridza zvinhu zvedu saka tirikushaya kuti toita sei," vadaro Muzvare Moyo
Vanoona nezvekufambiswa kwebasa musangano rinomiririra vagari re Masvingo United Residents and Rate Payers Alliance, VaHardlife Tangai, vashoropodza kushandiswa kwemauto ane zvombo.
"Isu panyaya iyi tinoona sekuti kanzuru yati manyisei nekuti haina kuita engagement ma vendors ne ve Zvipipi, dai vatanga vavapa pekutengesera uye kupa vezvipipi vopuwa pekupakira mota dzavo kwete kungovabvisa, nyaya yatiri kucondema ndeyekuti havagoni kuti masoja apinde akabata zvombo zvavo zvoita sekuti pane violence, hatingagoni kugara zvakana kana vanhu vachivhundutsirwa kudai," vadaro Tangai.
Meya weguta reMasvingo, VaHubert Fidze, vaudza Studio7 parunhare kuti havakwanisi kutaura zvakanyanya panyaya yemauto vachiti chirongwa ichi chakabva kumusoro kuhurumende .
"Issue yemasoja handifungi kuti ndingapa comment yauya ne directive from government saka isu taita vatete asi kana vari kutyikidzira vanhu tine urombo," vadaro Fidze.
VaFidze vakurudzira vanotengesa pamwe nevatyairi vezvipipipi kuti vauye kukanzuru vataurirane navo kuitira kuti vakwanise kutsvagirwa nzvimbo dzekushandira mudhorobha kuitira kuti vasashandire pese pese.
Chirongwa ichi chiri kuitwa kune mamwe madhorobha munyika, kunyanya muguta reHarare.